January 2010 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on January 21, 2010 February 19, 2010 by kyawkyawoo
March 17, 2009 ·3Comments · * I have posted this post on above date. I have decided to… Read more စော်ကားခြင်းနှင့်စော်ကားသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
ကိုယ်တော်ချောနဲ့ စာဖတ်သူများသို့ – Nge Naing
Posted on January 21, 2010 April 22, 2010 by kyawkyawoo
I have received several emails, asking me to readablog that insulted Buddhism. Myanmar Muslims living overseas are quite… Read more ကိုယ်တော်ချောနဲ့ စာဖတ်သူများသို့ – Nge Naing
Do you (really) believe in ‘Allah’? Md. Asham Ahmad( Malaysia Insider)
Posted on January 11, 2010 February 19, 2010 by kyawkyawoo
JAN 11 — Everybody knows “Allah” is notaMalay word but nobody would questionaMalay using the word… Read more Do you (really) believe in ‘Allah’? Md. Asham Ahmad( Malaysia Insider)
သူခိုးသေဖော်ညှိစာမျိုးတွေ၊ ရေးသူ လူထုစိန်ဝင်း
ခရစ္စမတ်နေ့က ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ယောက်လာပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ ပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ပုဆိုး အပြင် ခုခေတ် မြို့ပြရဲ့ ပြယုဂ်ဘူးစုံ ပုလင်းစုံခြင်း ကလည်း ပါသေးတယ်။ နက်စ်ကော်ဖီ၊ တူတံဆိပ် ထောပတ်၊ ခရတ်ဖ်ချိစ်၊ စပရိုက်စတာ… Read more သူခိုးသေဖော်ညှိစာမျိုးတွေ၊ ရေးသူ လူထုစိန်ဝင်း
Movie Avatar is all about love, humanity and justice
Posted on January 5, 2010 February 19, 2010 by kyawkyawoo
Finally, I watched Avatar movie inatheater. Immediately I was absorbed into the imaginary world, created by James Cameron.… Read more Movie Avatar is all about love, humanity and justice